4 Waxyaabood Oo Dhaca Markaad Ka Tagto Qiyaanoole Oo Aad Guursato Nin Daacad Ah - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»4 Waxyaabood Oo Dhaca Markaad Ka Tagto Qiyaanoole Oo Aad Guursato Nin Daacad Ah
4 Waxyaabood Oo Dhaca Markaad Ka Tagto Qiyaanoole Oo Aad Guursato Nin Daacad Ah
Markaad xiriir la yeelato nin daacad ah waxaa yeelataa rajooyin wanaagsan halka qiyaanoolaha uu kaa burburiyo dhammaan rajooyinkii wanaagsan ee aad lahayd beri.
Waxaad umaleysaa in nin kasta oo aad mustaqbalka la kulanto inuu kuula dhaqmayo sidii ninkii hore ee xumaa.
Hoos ka aqri 4 waxyaabood oo dhaca markaad ka tagto nin qiyaanoole ah oo aad guursato nin daacad ah.
Ragga sadexdaan waxyaabood u sameeya haweenka waa kuwa ugu wanaagsan oo haweeney kasta ay jeclaan lahayd
3 Siyaabood oo loola dhaqmo marka Lamaanahaaga dabeecadiisu isbadasho
Siyaabaha Lagu Kala Saaro Ninka Wanaagsan Iyo Kan Xun
Wali waxaad qabtaa kalsooni darro
Wax kasta si wanaagsan uma socdaan markaad hesho nin daacad ah sababtoo ah wali kama aadan bogsan dhaawacyadii hore. Arrimahaan ayaa wali ah kuwo dhibaato kugu haayo maadaama aanan si fudud looga bogsan. Sidoo kale waa kuwo saameeyn ku yeesha xiriirka cusub.
Ugu horreyn, ma rumeysan kartid inaad heshay qof ka duwan ninkaagi ama xaaskaagi hore. Waxaad la yaabeysaa haddii ninkaan cusub uu leeyahay ajandayaal qarsoon iyo haddii uu qorsheynayo inuu kuu hagardaameeyo sida ninkii hore uu kugu sameeyay oo kale.
Waxaad ogaatay sida uu uxumaa xiriirka aad ku jirtay
Waad ogeyd inay ahayd inaadan cafin munaafaqnimada iyo xummaanta balse waad sameysay oo waad cafisay.
Naftaada ayaad been u sheegtay, waxaad naftaada iyo qof kasta ku qancisay in xiriirkaadu uusan ahayn mid xun kadib markaad qarsatay oo aad iska indha tirtay dareenkaaga adigoo ogaay xaqiiqda.
Si,kastaba, hadda wax kasta way isbedeleen. Waad aragtaa sida daran ee xiriirkaagi hore uu uxumaa.
Markii ugu horeeysay ayaa waxaad si dhab ah u aragtay marxaladda cabsida iyo xanuunka leh ee aad soo martay.
Ugu dambeyn, dhammaan waayo aragnimadii xumaa ee lasoo dhaafay ayaa ku baraya inaad u mahadceliso ninkaan daacadda ah ee aad iminka dhinac joogto.
Waxaad ogaatay waxaad mudantahay
Sanado badan ayuu ninkaagi hore dusha kaa saarayay qalad walba. Wuxuu yareeyay qiimahaagi isla markaana uu kaa dhigay qof aanan mudneyn jacayl.
Muddo kadib waxaad bilaawday inaad isaga rumeysato. Waxaa uu ku guuleystay inuu kugu qanciyo inaan laguugu talagelin in lagu jeclaado waana wax aad mudneyd oo aad heshay.
Si,kastaba, hadda waxaad aragtaa in waxyaabahaas midoodna aysan run ahayn. Hadda waxaad aragtaa in six un laguula soo dhaqmay isla markaana qaabkii aad mudneyd aanan laguula soo dhaqmin.
Hadda waxaad aragtaa in jacayl laguugu talagalay isla markaana laguu jeclaan karo.
Waxaad dib u heshaa kalsoonidaadi
Qofka markii la qiyaano waxaa burburta kalsoonidiisa. Waxaad la yaabeysaa sababta aad ugu filnaa weysay ninkaad jecleyd isla markaana uu uraadsaday qof kale.
Muxuu ka waayay xiriirkaaga oo uu ka raadiyay banaanka?
Xalaaddu way kasii dartaa marka qiyaanoolaha uu diido inuu qaado masuuliyadda iyo markii uu wax kasta ku sameeyo awood isla markaana uu kugu qanciyo inaadan waxna ku wanaagsaneyn adiagana sabab aad u tahay wax kasta oo dhacay.
Natiijada arrintaas ka dhalata ayaa keenta inay kalsoonida kugu sii yaraato isla markaana muuqaalka naftaadu si guud u burburo.
Hagaag, farxad ayaad heshaa markaad tuurtid qiyaanoolahan isla markaana aad doorato nin rag ah, caaqil ah isla markaana daacad ah.
Ninkaan wuxuu arkaa qiimahaaga isagoo sidoo kale ku dareensiiya inaad qiimo leedahay oo aad naftaada ku kalsoonaato.
Wuuku xitiraamaa wuuna ku qiimeeyaa taasoo kugu dhiiri gelisa inaad dib u hesho kalsoonidaadii.
Jacaylka ninkaan ayaa kaa keena inaad indhahaaga isku eegto isla markaana aad isjeclaato.
Taas ayaa ah wixii loo baahnaa miyeysan ahayn?
Four bad styling habits to avoid if you have breakage-prone hair
Tuug isku dayay inuu Mobile ka dhaco Gabar Feeryahanad ah & Waxa ku dhacay kadib (Daawo Sawirro)
3 Waxyaabood oo khatar ah oo ay tahay inaadan ku sameyn Canug yar
Gudniinka dumarka sidee loo furi karaa? (DAAWO)
Iska Daawee Gooryaanka Adigoo Gurigaaga Jooga